मधुमेह लाग्नुका कारण, लक्षण र बच्ने उपाय के के हुन् त ? वरिष्ठ फिजिसियन डा.दिनेश लम्साल | Hamro Doctor info@hamrodoctor.com
मधुमेह लाग्नुका कारण, लक्षण र बच्ने उपाय के के हुन् त ? वरिष्ठ फिजिसियन डा.दिनेश लम्साल मधुमेह लाग्नुका कारण, लक्षण र बच्ने उपाय के के हुन् त ? वरिष्ठ फिजिसियन डा.दिनेश लम्साल 192 views
वरिष्ठ फेमेली (परिवार) फिजिसियन डा.दिनेश लम्साल भन्छन् रगतमा चिनीको मात्र बढी हुनु नै मधुमेह हो । सामान्यतया स्वस्थ व्यक्तिमा रगतमा चिनीको मात्रा खाना खानुअघि १०० र खाना खाएपछि १४० हुनुपर्छ । रगतमा यो भन्दा बढी चिनीको मात्र देखिनुनै मधुमेह हो । हामीले खाएको खानेकुरा शरीरमा पुगेर ग्लुकोजमा परीणत हुन्छ र इन्सुलिनको माध्यमबाट रगतमा मिसिन्छ ।
योनी किन चिलाउँछ ? के तपाईंको महिनावारी अनियमित भएको छ ? डा.ज्योति अग्रवाल (स्त्री रोग विशेषज्ञ)
मलद्धार वरपर घाउ आए वेवास्ता नगरौं, यो फिस्टुला पनि हुन सक्छ ? बच्न के गर्ने ? विशेषज्ञका अनुसार गर्भावस्थामा गर्नुहुने र नहुने कुरा बालकको अण्डकोषमा देखिने तीन समस्याः जसको उपचार नगर्दा बाँझोपन हुनसक्छ Tweets by @hamrodoctor